UChristina Ricci noJuliette Lewis Baphenduka Abazidlayo Ukuze Basinde 'Kumajackethi' - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo UChristina Ricci noJuliette Lewis Baphenduka Abazidlayo Ukuze Basinde 'Kumajackethi'
UChristina Ricci noJuliette Lewis Baphenduka Abazidlayo Ukuze Basinde 'Kumajackethi'
Yini obungayenza ukuze usinde?
by UTrey Hilburn III August 6, 2021
by UTrey Hilburn III August 6, 2021 54,116 ukubukwa
Isikhathi sokubonisa sinombukiso ozwakala uphoqa kakhulu endleleni enesihloko, Amajakethi aphuzi. Uchungechunge lwezinkanyezi uChristina Ricci omangalisayo kakhulu noJuliette Lewis. Lesi sakhiwo sigxile eqenjini lebhola lezinyawo okufanele lisinde ngemuva kokuphahlazeka kwebhanoyi lenza noma yini eliyidingayo futhi lenze uhlobo lokuhamba kweNkosi Yezimpukane kule nqubo. Kamuva kugxila kulokho abasindile okufanele baphile nakho futhi bagcine imfihlo ukuze baphile impilo ejwayelekile. Umphumela walolo chungechunge lokugoba uhlobo oluyizingxenye ezilinganayo ezishaqisayo ngokwengqondo kanye nokuza kwendaba yobudala… kepha ngokudla amazimuzimu.
Amazwibela we-Showtime's Amajakethi aphuzi kuhamba kanjena:
Iqembu labadlali bebhola likanobhutshuzwayo lamantombazane anethalente elimangalisayo eliba (un) abasindile abanenhlanhla yokuphahlazeka kwendiza ekujuleni kwehlane lase-Ontario. Lolu chungechunge luzobhala umlando wokwehla kwabo eqenjini eliyinkimbinkimbi kodwa elichumayo kuya emindenini elwayo, edla abantu, ngenkathi futhi ilandelela izimpilo abazame ukuzihlanganisa eminyakeni ecishe ibe ngama-25 kamuva, okufakazela ukuthi okwedlule akukaze kudlule nalokho okwaqala Ihlane lisekude ukuphela.
Lolu chungechunge luzwakala lumnandi futhi i-teaser emfushane esiyithola kulaba bobabili ababhekene nayo isinikeza amandla okuthi uRicci uzodlala umkhohlisi kanti uLewis ungumlingisi ophambili obekufanele aphile nomsangano ophoqelelwe ophoqelelwe ukuba asinde.
Lolu chungechunge lubuye lube nezinkanyezi uMelanie Lynskey, uTawny Cypress, u-Ella Purnell, uSammi Hanratty, uSophie Thatcher, uSophie Nelisse noJasmin Savoy Brown. Isiqephu somshayeli siqondiswe nguKaryn Kusama (Isimemo, Umbhubhisi)
Ucabangani nge-trailer ye Amajakethi aphuzi? Sazise esigabeni sokuphawula.